६० बर्से नायक भुवन केसिको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी ! हेर्नुहोस पुरा विवरण सहित - Mitho Khabar
६० बर्से नायक भुवन केसिको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी ! हेर्नुहोस पुरा विवरण सहित
October 19, 2020 mithokhabarLeaveaComment on ६० बर्से नायक भुवन केसिको यस्तो अनौठो प्रेम कहानी ! हेर्नुहोस पुरा विवरण सहित
उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगरेता पनि भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम देखिन्छन् ।
उनि नेपाली चलचित्रका सर्वाधिक सफल कलाकार समेत मानिन्छन्। उनले निर्माण र अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । फिल्ममा सफल हुदाँहुदै पनि यद्यपि भुवन पारिवारिक रूपमा भने असफल छन् ।
भुवन दोस्रो विवाह पनि सफल नभएर एक्लिएको बेलामा जियाले भुवनलाई साथ दिएकी थिइन् । सन् २०१४ देखि भुवन र जिया संगै बस्न थालेका छन् । जिया भुवनकै घरमा बस्छिन् । उनीहरुले विवाह गरेको छैन भनेका छन् तर परिवारले भने जियालाई भुवनको जोडी भनेर स्वीकार गरिसकेको बताइन्छ।
भुवनले पहिलो मागी विवाह गरेका थिए । त्यो विवाह टिकेन । त्यसपछि उनले दोस्रो प्रेम विवाह नायिका सुस्मिता केसीसंग गरेका थिए । उनीहरुको छोरा अनमोल अहिलेका चल्तीका नायक हुन् ।
केही समय यता सामाजिक सञ्जालमा अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको वि’वाद चलिरहेको छ । सो विवाद अहिले राष्ट्रिय कलाकार संघ हुँदै अदालत सम्म पुगेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नायक भुवन केसीले नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहविरुद्ध मु द्दा दर्ता गरेका छन् । उनले १० करोडको क्षतिपूर्तिको माग सहित मु द्दा दर्ता गरेका हुन् ।
नायक भुवनको ब्यक्तिगत र सार्वजनिक जिवन निकै विवा’दास्पद छ । उनका दुवै श्रीमतीले स’म्बन्ध वि च्छेद गरिसकेका छन् । एक पछि अर्को श्रीमतीले साथ छोडेपछि अहिले उनी जिया केसीसंग साथमा छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा जियालाई आफ्नो साथी भनेर सम्बोधन गर्छन ।
दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हो यही माया हो’ बाट रंगीन संसारमा प्रवेश गरेकी हुन्— जिया केसी । झापाबाट अभिनेत्री बन्न काठमाडौं आएकी जियाले उक्त चलचित्रपछि एटिएम, ब’र्बाद, वाचा, रिङरोड, रङ वे आदि चलचित्रमा अभिनय गरिन् । पछिल्लो समय भने उनी चलचित्र अभिनयबाट लगभग अलगजस्तै छिन् ।
भुवन र जीयाको यो ‘लुकिछिपी’ प्रेमले कहिले औपचारिकता पाउला त ? यस बिषयमा भुवनले भने अहिलेसम्म हरियो बत्ति बालिसकेका छैनन् । सार्वजनिकरुपमा केही टिप्पणी गरेका पनि छैनन् ।
यि हुन यस्ती मोडल जसको पछाडिको यति ठुलो भागले विस्वमै चर्चा अहिलेसम्म धेरै कर्सुी तथा बेड भाँचिएको खुलासा
यी हुन् प्रेममा कहिल्यै धोका नदिने ५ राशिका युवतीहरु (हेर्नुहोस भिडियो सहित)